SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 31aad oo caawo xiiso gaar ah leh. – Filimside.net
Timo jarihii markuu hadalkeyga maqlay ayuu wuxuu I dhahay; waxaan u maleynaa inaadan garaneynin darajada aan leeyahay, aniga gacanteyda waxay qabataa madaxyada boqorada, waaliyada garsoorayaasha iyo raga ugu sareeyo dowlada marka ka fiirso.
Wuxuu iigu jawaabay; waxay ila tahay inaad dagdagsantahay ee u kaadi dagdagta sheydaan bey ka ahaatee iyadoo sunada xitaa ay na fareyso inaanan dag-dagin lkn waxaan la yaabanahay sheyga aad u dagdag santahay oo dartiis ii karkarbeyneyso wuxuu yahay waxaana jeclaan lahaa inaan ogaado.
Markaas ayaan ku dhahay anigaa kuu sheegayee horta madaxa ii jar.
Markaas ayuu bilaabay iinuu madaxa ii jaro hal dhinac markuu ka jaray ayuu igu dhahay makuu wada jaraayo ilaa aad iga sheegto halka aad u socoto.
Markii aan arkay habdhaqankiisa iyo in uu waqti igu socdo ayaan waxaan ku dhahay koox aan saaxiibo nahay ayaan la balansanahay ee dhaqso madaxa ii habeey.
Markaas ayuu wuxuu igu dhahay; koox aan saaxiibo nahay markaad dhahday waxaan soo xusuusto marti aan rabay inaan manta marti sooro waaba iska iloobay haddana waxaa lagaaray waqtigii ay ii imaan lahaayeen waa inaan wixii ay cuni lahaayeen u sii diyaariyaa ee waan kaa tagay.
Markaas ayaan inta yaabay ku dhahay oo madaxeygana ma sidaan ayaad uga tgaeysaa?
Wuxuu ku jawaabay xal kale malahan waxjasta martida ayaa ka muhiimsan.
Markaas ayaan dhahay hadey saas tahay martida qadadooda anigaa dhhibayo oo cunto karsan u hayo ee howsha bilow.
Markaas ayuu I dhahay; nin fiican ayaad tahay waadna mahadsantahay lkn aaway cabitaan side laga yeelaa?
Waxaan dhahay cabitaanka asna anaa kuu diyaarinaayo.
Markaas ayuu I dhahay hadana; bilaah caleyk wixii la isku carfin lahaa iyo hadiyadihii aaway?
Waxaan hadana ku dhahay dhamaantooda anigaa dhiibaayo ee marklee madaxaan hoolan iga haggaaji.
Markaas ayuu madaxi hagaajin ku bilaabay wuxuuna I weydiiystay inuu I raaco meesha aan u socdo oo uu asxaabteyda lasoo kulmo?
Waxaan ku dhahay lama ogola inaan meesha tago anoo qof ila socdo waa muhiim inaan kaligey ahaado.
Markaas ayuu hadana igu dhahay; maxaan ugu maleeyaa in gabar kuu balansantahay?
Markaas ayaan ku dhahay waayahay waan is raaceynaa anoo rabay inuu markuu madaxa ii jaro aan ka diido asna wuxuu ahaa mid dareen badan oo wuxuu igu dhahay inaad I khiyaanto ayaad rabtaa oo iga dhuumato.
Markaas ayaan ku dhahay ballan waaye kaama dhuumanaayo ee iisoo laabo oo raashiinkaan martida u geey.
Kadibna tin jaristii ayuu ii dhameeyay markaas ayaan timo jarihii lacagatiisii siiyay iyo raashiinkii waxana u saaray xamaali wuuna baxay, ana iinta labistay misna is carfiyay ayaan soo baxay ilaa aan kasoo gaaray gurigii waxaana ahaa mid aad iyo aad u daahay, intaan jidkii kusoo jiray ayaan waxaan arkay timo jarihii oo isoo dabo socdo markaas ayaan socodkii boobsiiyay ilaa aan gurigii dalakh kasoo dhahay.
Nasiib xumo markii aan gurigii galay ayaa waxaa soo galay qaaligii markaas ayuu la kulmay mid kamid ah jaariyadihiisa oo dambi sameysay markaas ayuu ul meesha taalay bilaabay inuu ku garaaco.
Waxaa qeyladeeda kusoo baxay mid kamid ah adoomadiisii wuxuuna bilaabay inuu jaariyada waaliga ka celiyo hase yeeshee asna waa lagu daray oo waa la garaacay.
Timo jarihii wuxuu taaganyahay bananaka guriga markii uu maqlay qeyladii adoonka ayuu wuxuu mooday in aniga la igaraacayo markaas ayuu cabaaday oo inta qeyliyay asoo dharka iska jeexayo reerkeenii orod ugu tagay wuxuuna ku dhahay wiilkiinii waaa la dilay oo kaw ayaa laga siiyay waxaana dilay waaliga magaalada ee soo carara.
Markaas ayaa dhamaan reer tolkey oo ordayo magaaladii soo galeen iyagoo qeylinaayo misna leh alla wuu dilaayee war isku soo baxaay timo jarihiina uu hor booday.
Sey usoo ordayeen ayaa waxay u yimaadeen waaligii gurigiisa albaabkii ayayna soo garaaceen markaas ayaa waxaa ka furay waaligii wuxuuna weydiiyay maxaa idinku dhacay?
Markaas ayay dhaheen sayidkeena iyo wiilkeena ayaad dishay.
Wuxuu ugu jawaabay; oo muxuu falay oon ku dilay? Muxuuna timo jarahaan idinka dhex qabanayaa?
Markaas ayaa waxaa hadlay timo jarihii wuxuuna dhahay; adiga ayaa hada dhow garaacday ana waan maqlayay qeyladiisa.
Markaas ayuu waaligii dhahay; oo muxuu falay oon ku dilay yaana soo galiyay gurigeyga xaguuna ka yimid muxuuna halkaan kasoo doonay?
Markaas ayuu timo jarihii dhahay; waaliyow isyeel yeelka iska daa aniga waxwalba waan ogahay iyo sababta uu gurigaada usoo galay iyo xaqiiqda oo dhan taasoo ah in gabadhaada ay asiga jeceshahay asna uu ayada jecelyahay, waana ogahay inuu gurigaaga soo galay oo aad adoomahaaga ka adeejisay iney garaacaan, wlhi baanan kala hareynin ilaa aan arinkeena khaliifka u gudbino ama aad sayidkeena noosoo bixiso, adiga soo baxsana ha idhihin ee waxaan rabaa inaad adiga noosoo bixiso.
Markaas ayuu waaligii yaabay misna hadalka timo jaraha la tacajubay markaas ayuu timo jarihii ku dhahay; hadaad run sheegee oo waxaad sheegtay run yihiin adiga guriga gal oo soo bixi.
Markaas ayuu timo jarihii guriga soo galay markii aan arkay asoo soo socdo ayaan isdhahay baxso oo carar lkn meel aan u cararo ayaan waayay waqtigana wuu igu yaraa markaas ayaan galay sanduuq weyn oo meesha yaalay.
Kadib timo jarihii ayaa soo baxay oo meeshii aan aniga joogay ayuu yimid meelahana baarbaaray markuu wax ka waayayna wuu laabtay ana anoo aad u naxsan ayaan sanduuqii kasoo baxay markaas ayaan darbi meesha ku yaalay inta fuulay kasoo booday wuxuuna ahaa darbi aad u dheer taasoo igu kaliftay inaan lugta ka jabo,
Markii aan darbigii kasoo dhacay ayaan waxaan arkay dad badan oo meesha dhooban markaas ayay halmar isoo wada fiiriyeen ana inta isku naxay ayaan jeebka gacanta galiyay xoogaa dahab iigu jiray inta soo bixiyay ayaan u wada firdhiyay si aan isaga mashquuliyo.
Markii dadkii dahabkii kuwada mashquuleen ayaan soo cararay si aan nafteyda ula badbaado mise waaba timo jarihii oo igu soo raad joogo, meelkasta oo aan ku dhuuntana iga soo dabo galaayo ilaa uu toogtii dambe iga qabtay asigoo ileh soo kuma dhihi aniga dagdaga ma fiicna waa camal sheydaan ee ha dagdagin bal fiiri hada mashaqada aad dhexda ka gashay iyo waxaad fashay hadii aanan manta kaasoo gaari laheyn kow ay kaa siin lahaayeen alx dheh manta anigaa nool oo kaasoo gaaray wixii aad fashayna kuu qaban waayo waxaad adiga tahay mid caqli yar misna dagdag badan.
Markaas ayaan anoo aad u xanaaqsan xanuun iyo ciilna ihaayaan ku dhahay “ wixii aad fashay makugu filnaan waayeen ilaa aad meelkasta iga soo dabo gasho heer aan gaaray inaan dhimasho ku duceysto musiibada aad I galisay manta owgeed.
Markaas ayaa inta ciilka iga sii batay tukaanle meesha joogay magangalyo weydiistay maadaama aan aniga lug ka jabanahay magaaladana ku ceebeysnahay.
Tukaanlihii ayaa I magan galiyay oo iga celiyay timo jarihii, aniga markaas kadib si aan magaaladaas uga soo baxdsado waxaan qoray warqad aan ehelkeyga ugu sheegayo inaan magaalada ka guurayo.
Waxaan gaday gurigeyga kadibna meeshii ayaan kasoo guuray ilaa aan ka imid magaaladaan markii aad ii wacdeena guumeyskaan wajiga xun leh oo sababay in lugta jiis kanoqdo oo idin dhex fadhiyo ayaan arkay.
Markaas ayuu wiilkii diiday inuu fariisto markii aan sheekadiisa maqalnay ayaan waxaan lahadalnay timo jarihii waxaana ku dhahnay run miyaa wuxuu ninkaan sheegaayo?
Wuxuu timo jarihii ku jawaabay; haa waliba kas ayaan u sameeyay arinkaas hadii aanan sameyn laheyna manta wuu dhiman lahaa, hada asiga lugta oo kaliya ayaa wax kasoo gaareen lkn aniga hadaan ahaan laheyn naftiisa ayuu weyn lahaa, asiga wuxuu ii maleeyaa nin warbadan oo dhibka soo gaaray kamasuul ah lkn xaqiiqda midas wey ka duwantahay sidey wax jiraana aniga ayaa idiin sheegaayo.
Wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay…..
La soco qeybta 32aad.